MADADAALADA DUURKA AH IYO CAAFIMAADKA - Norsk Friluftsliv
MADADAALADA DUURKA AH IYO CAAFIMAADKA
Publisert 19.06.2015 – Sist oppdatert 24.06.2020
U wanaagsan indhaha
Aragga indhaha waxa u wacan iftiinka maalinta, saacado yar oo maalin kasta banaanka loo baxana waxay ka hortagi kartaa in aragga fog xumaado. Aragga waxa loogu talogalay in meel fog lagu eego, waana lagu daalayaa in waqti badan lagu jiro gudaha. Waqti badan oo dibadda la joogaa waxay u wacantahay indhaha.
Jimicsiga/dhadhaqaaqa jidhku wuxu xoojinayaa difaaca jidhka.
Iftiinka qorraxdu waa meesha ugu muhiimsan ee lagu helo fiitamiin D, oo ka hortagta dhowr cudur. Haddii fiitamiin D-gu ku yaraado, waxa uu qofku dareemi karaa caajis iyo daal, waxaana ka iman kara lafo-burbur, lafo-xanuun iyo murqaha oo awood yaraada..
Jimicsiga jidheed ee joogtada ah waxa uu saamayn wanaagsan ku leeyahay dheefshiidka.
Jimicsiga iyo hawada dibedda ee oo la qaato waxay dawo wanaagsan u yihiin madax-xanuunka.
U wanaagsan wadnaha
Wareegga dhiigga iyo heerka garaaca wadnaha ayaa kor u kaca xataa marka la sameeyo jimicsiga fudud waana wax u wacan wadnaha.
Jimicsiga jidhku waxa uu hoos u dhigaa qatarta imaanshaha dhiig-karka wuxuuna ka hortagaa xinjirowga dhiigga, cudurrada murqaha iyo lafaha, cudurrada wadnaha iyo xididaada dhiiga, sonkorowga nooca 2-aad, noocyo ka mid ah kansarka iyo buurnida xad-dhaafka ah..
Soo lugaynta duurka iyo bannaanka ha noqoto in lagu socdo jayga ama cawska ayaa u wanaagsan murqaha, dheelitirnaanta iyo isku wadka dhaqdhaqaaqa jidhka. Bedbeddelka tallaabada socodka iyo isticmaalka muruqahu waxay xoojin karaan seedaha waxayna yarayn karaan dhaawaca ka yimaada culayska.
Jimicsiga jidheed waxa uu yareeyaa xanuunka dhabarka iyo qoorta.
Sanqadh yaraanta iyo buuq la`aantu waxay dajiyaan qofka waxaanay ka hortagaan istereska.
Ka hortaga werwerka
Marka aynu u baxno dabeecadda waxa yaraada werwerkeena, waxaana kordha qanacsanaanta. U bixitaanka dabeecadda ayaa ka hortagi kara werwerka iyo niyad-jabka.
Hawada cusub iyo jimicsiga jidheed waxay wanaajiyaan hurdada.
Ku mashquulka hawsha
Waxa qofka u fududaata inuu wax barto iyo inuu wakhti siiyo hawlaha.
Istereska oo yaraada
Nafiska ayaa kordhaya , maskaxdana waxa ka yaraanaya hawsha marka qofku arki wax cagaar ah. Bey’adaha magaaladu waxay mashquulka ku badiyaan maskaxda waxaanay kordhin karaan istereska.
Farxad nololeed oo dheeri ah
Nolosha duurka waxay siinaysa nolosha farxad dheeri ah. U bixitaanka dabeecaddu waxa laga helaa farxad nololeed oo dheeraad ah.
Waa wax fudud in loo baxo dabeecadda waxaanay keenaysa in aynu dareenno guul, oo markaa ay shaqooyinka iyo hawluhu inoo fududaadaan.
Ka hortagga niyad-jabka
Maadaama xilli-sannadeedka qaboobuhu uu yahay xilli dheer oo qorraxdu yartahay waxa muhiimad gaar ah leh in loo baxo hawo cusub iyo iftiinka qorraxda si looga hortago niyad-jabka xilliga qaboobaha.
Qanacsanaan dheeri ah
In maalin kasta loo bixi karo dabeecadda waxa ay muhiim u tahay qanacsanaanta guud.
Talooyinka dadka socod-lugeed sameeya xilligan kooronada>>>